१० वर्ष लगाएर बनाइएको यो टेबुल, जसको मूल्य १ अर्ब २६ करोड !
कोशी अनलाइन शनिबार, १९ साउन, २०७५ मा प्रकाशित
एउटा सामान्य टेबुलको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? केही हजार वा बढीमा केही लाखसम्म पर्ला । तर, होइन । यहाँ हामी तपाईंलाई एउटै टेबुलको दाम थुप्रै लाख वा करोडको मात्रै नभएर अर्बौं रहेको तथ्य भनिरहेका छौं ।
हो, एउटा टेबुलले विश्वकीर्तिमान बनाउने भएको छ । त्यो कसरी भने, बेलायतको लन्डनमा बहुमूल्य वस्तुहरूको कला प्रदर्शनी हुँदैछ । र, त्यसमा ४ सय वर्ष पुरानो एउटा टेबुल पनि राखिएको छ । जसको मूल्य १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सुरुवाती मूल्यसहित लिलाम बढाबढमा राखिने भएको छ ।
बताइएअनुसार सन् १५६८ मा फ्लोरेन्सको राजगद्दीका उत्तराधिकारी फ्रान्सेस्को डि मेडिसीले एक ठूला आर्टिटेक्टबाट उक्त टेबुल बनाएका थिए । ती आर्किटेक्टको नाम जर्जियो वासारी थियो ।
आखिर किन एउटा टेबुलको दाम नै यति महँगो पर्न गयो होला ? यसको पनि खास कारण छ । य उक्त टेबुल ऐतिहासिक थियो वा भनौं, यो विशेष प्रविधिबाट बनेको थियो ।
बताइएअनुसार उक्त टेबुल पिएत्रे ड्युरे नामको एउटा प्रविधिबाट निर्माण गरिएको हो । उक्त टेबुलमा सयौंको संख्यामा पातला तथा बहुमूल्य कलात्मक पत्थरसमेत जाडन गरिएको छ । त्यत्ति मात्रै हैन, टेबुल बनाउन सेतो रंगका सिंगमर्मरका टुक्रा पनि पयोग गरिएको छ ।
बताइएअनुसार उक्त ऐनिहासिक टेबुल बनाउन मात्रै १० वर्ष लागेको थियो । र, टेबुल त्यसबेलाको सबैभन्दा महँगो कलात्मक वस्तुका रूपमा लन्डनको इतिहासमा दर्ज छ ।
लन्डनमा जुलाई २८ देखि अगस्ट ७ सम्म चल्ने प्रदर्शनमा यो टेबुल प्रदर्शनीमा राखिने बताइएको छ । खबरअनुसार यो टेबुलको सुरुआती मूल्य मात्रै १ करोड १६ लाख डलर रहेको छ ।